Oovimba beOyile eKrwada-Funda ukurhweba
tag: I-oyile endala
I-Brent ivala nge-80 yeedola njengoko iMarike ingayihoyi i-Omicron
Ukuhlaziywa: 29 Disemba 2021
I-oyile ekrwada ye-Brent yenyuka nge-1.3% eyi-1.40 yeedola, nge-79.64 yeedola ngomphanda njenge-11:19 GMT. Ngoxa i-WTI crude inyuke nge-1.5% eyi-$ 1.15, i-$ 76.72. Ezi zikhankanywe ngasentla zithengiswe ngexabiso eliphezulu kwinyanga enye.” Ithemba lokuhla okukhulu kwezitokhwe ezikrwada zase-US kunye nokuphazamiseka okukhulu kwemveliso evela eNigeria, Lybia nase-Ecuador nazo zinike inkxaso ethile” utshilo uGiovanni Staunovo.
Kule nyanga amazwe amathathu avelisa i-oli adize ukuba isenzo samandla aphezulu kwimveliso ye-oyile ngenxa yokugcinwa kunye nokuyeka imveliso. Uvavanyo lokulungiselela olwenziwe nguReuter luveze ukuba isitokhwe seoli sase-US sinokuthi sehlile kangangeentsuku ezingama-35 ngokuthe ngqo, njengoko isitokhwe sepetroli sibonakala singatshintshi kwiveki ephelileyo.
Isiphumo seNtsholongwane kaCorona kunye nokwahluka kwayo (i-Omicron) kwiCandelo lezoPhapho, iMveliso eKrwada kunye neMarike yeMpahla.
Umphathiswa wezempilo wase-Bhritane wezempilo udize ukuba akukho zithintelo ze-Covid-19 ziya kubekwa eNgilani ngo-2021, ngelixa urhulumente elinde ukufumana ubungqina bokuba icandelo lezempilo lelizwe linokujongana nezinga le-Covid-19. Ukunqongophala kwabasebenzi okubangelwe yi-Omicron okubangele ukurhoxiswa kwenqwelomoya eninzi, ngexesha leholide yeYuletide eMelika.
Izigqibo ukuba ukuveliswa okujoliswe kuyo kwe-400,000 yemibhobho ye-crude ngosuku ngoFebruwari kufuneka kuqhubeke okanye akunjalo, kuya kwenziwa ngexesha lentlanganiso ye-OPEC ehlelwe ngoJanuwari 4, njengoko abatyali-mali balindele umphumo wale ntlanganiso. Ngexesha lentlanganiso yokugqibela ye-OPEC, iqumrhu lagqiba ekubeni liqhubeke nenjongo yalo yokunyusa imveliso ngoJanuwari, nangona i-Omicron. Abaphathi beeNgxowa-mali baye banyusa iinketho zabo ezinde zase-US kunye nekamva kwiveki ukuya kwi-21 kaDisemba, njengoko bekuxelwe ngoMvulo yi-US Raw material Futures Trading Commissions. Iqela lababukeli landise ikamva elimanyeneyo kunye nezikhundla zokhetho kwikomkhulu laseNgilani naseNew York ukusuka kwi-4,634 ukuya kwi-259,093 yekhontrakthi ngeli xesha.
tags Ezingcolileyo, I-oyile endala, Iindaba zeMakisha, ioyile
I-USD / CAD Falls ukuya kwi-1.2500 njengoko iRally yeoyile ipholile
Ukuhlaziywa: 19 Matshi 2021
I-USD / i-CAD ithengise ngaphezulu kwiseshoni yaseYurophu ngolwesiHlanu kodwa yacima izibonelelo zayo zemihla ngemihla yaza yawa ngaphantsi kwenkxaso ye-1.2500 kwindawo evulekileyo yentengiso yase-US, njengoko imeko esisiseko ihlala ingachananga.
I-loonie yahlaselwa kakubi ngoLwesine kulandela ukwehla okukhulu kumaxabiso eoyile ekrwada. Ngamaxabiso e-oyile ekrwada okuzinzisa kunye nokuhamba enyuka ngaphezulu kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, uxinzelelo olusezantsi kwi-CAD luye lwancipha.
Ngaphandle kwentshukumo yexabiso leoyile ekrwada kunye nengxelo yokuthengisa ngokuthengisa okungcono kunokuba bekulindelwe ngoJanuwari, isiseko esisisiseko se-USD / CAD besiludlolo. Ngeli xesha, idola yaseMelika yangqina ngamandla okomeleleyo kulandela isigqibo seFed sokuyeka ukwandisa umthetho wesifo esonyusa ubhubhane (SLR) ekupheleni kwenyanga. Le mithetho yavumela iibhanki ukuba zibambe ubuncwane be-US kunye needipozithi kwiimakhishithi zabo ezilinganiselweyo zikhululwe kwiimfuno zesiqhelo semali eyinkunzi, eyagqitywa yi-Fed ekuqaleni kwentlekele ye-Covid-19 ukuthintela uxinzelelo lokuthengisa olugqithisileyo kwimakethi yezemali yase-US.
Ukuqhubela phambili, kwiveki ezayo kunokuba yinto ethe cwaka kubarhwebi be-CAD, ngezimvo nje ezivela kwisekela-rhuluneli yeBhanki yaseCanada, uToni Gravelle, ukugxila kuyo. Okwangoku, abathengisi be-USD baya kugxila kwizimvo ezivela kuSihlalo weFed uJerome Powell kunye namanye amalungu e-Fed kunye ne-PMit yokuqala ye-PMIs yedatha yokunyuka kwamaxabiso.
Ukuphindwaphindwa kwentengiso yaseKhanada
I-Canada ikhuphe i-Retail Sales data engcono kunokuba bekulindelwe ngoJanuwari, kunye nesantya se-MoM sokwehla kwentengiso ephambili kwi-1.1% xa kuthelekiswa noqikelelo lweemarike ezi-3.0%. Ukuthengisa okuthengisa kakhulu kuye kwafika ngamanani angcono kunokuba bekulindelwe, ngethontsi le-1.2% MoM xa kuthelekiswa ne-3.0% ekulindelwe ngokubanzi.
Ukwehla bekubonakalisa ukwehla okukhulu kwintengiso yamanye amacandelo athe avalwa ngokuvalwa kweevenkile ezingabalulekanga eCanada.
tags IBhanki yaseCanada (BOC), I-oyile endala, Forex, iindaba, USDCAD
Ioyile ekrwada: Urhwebo lweWTI phantsi koXinzelelo lweBearish emva kokuPhonsa phantsi kweNqanaba lama- $ 63.50
Ukuhlaziywa: 26 Februwari 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-ngoFebruwari 26
Ngexesha lokubhala, i-WTI ihlala kurhwebo ngonyawo lwangasemva kwi $ 62.53 emva kokuba uxinzelelo lwabathengisi lutyhale i-USDWTI kwisibini ukuya kwi-61.82 yeedola mihla le. Umgqomo we West Texas Intermediate (WTI) ubethe kwelona nqanaba liphezulu ngaphezulu konyaka kwi $ 63.79 ngexesha leseshoni yangaphambili, nangona kunjalo, wenza isaphulelo ngoLwesihlanu.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 70.10, $ 67.52, $ 63.73
Amanqanaba enkxaso: $ 60.72, $ 57.40, $ 53.90
I-USDWTI yexesha elide iTrend: Bullish
Ukusuka kumbono wobuchwephesha, i-USDWTI ibonisa imakethi ecacileyo yokuthengisa kwitshathi yemihla ngemihla. Inyathelo elingaphezulu kwesithintelo se- $ 63.79 sinokubangela ukuqhekeka okulandelayo. Nangona kunjalo, i-RSI ikuluhambo lokulungisa ngaphambi komlenze wayo olandelayo. Ukutsala emva kwiveki ephezulu kwi- $ 63.79 phantsi kwe-MA 5 kunye ne-13 threshold kunokwenza ukuthengwa okongeziweyo.
Oku kulandelayo kubuyela umva, nangona kunjalo, akunakuhlala ixesha elide njengoko abathengi banokuthenga idiphu kwinqanaba lama-60.72. Ke, abathengisi be-WTI kufuneka bagcine amehlo abo kumgca wenkxaso ye-MA 13, kwi- $ 60.50 ngexesha lokuhla okuthe kratya. Nangona kunjalo, nabuphi na obunye ubuthathaka obuya kuqhutywa yinkxaso ethe tyaba yeeveki ezintathu ubudala kufutshane nenqanaba le- $ 57.40.
I-USDWTI yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Ukulinganisa
Intshukumo yexabiso le-WTI ngoku ithengisa malunga ne- $ 63.18 kunye ne- $ 61.78 yamanqanaba e-intraday ngaphaya kwexesha lesiphelo elisondeleyo kwinqanaba lesiteshi kwinqanaba le- $ 60.72. Ngenqanaba eliphezulu lokuchasana eliboniswe kwi- $ 63.79 yexesha elikufutshane, abahlalutyi balindele ukuba amaxabiso athengise ngaphakathi kolo luhlu.
Kwicala elingaphezulu, ikhefu elingaphaya kwenqanaba le- $ 63.79 liza kubona amaxabiso eoyile ecela umngeni kwinqanaba leengqondo lokunganyangeki. Amaxabiso kunokwenzeka ukuba ahlale ethotyelwe kwixesha elifutshane kunye noxinzelelo lokuthengisa ngoxinzelelo, ngakumbi ngokuxhalaba kokubuyiselwa kwezoqoqosho okushiyekileyo ngoku.
tags I-oyile endala, Uhlalutyo Technical, I-USDWTI
I-Euro Falters Emva kokuKhutshwa kweDatha, i-CAD iyahlala kumaxabiso eSitayile seoyile
Ukuhlaziywa: 3 Februwari 2021
Ubuthathaka be-euro buyaqhubeka ngaphandle kwamanani alindelekileyo okunyuka kwamaxabiso. I-franc yaseSwitzerland kunye neeponti ezibalaseleyo nazo ziyathamba kancinci. Idola, kwelinye icala, liyasokola ukukhulisa umvuzo emva kokuqeshwa kwe-ADP eyomeleleyo kunokuba bekulindelwe. Idola yaseNew Zealand iyaqhubeka nokurhweba njengeyona inamandla, inyusa idola lase-Australia kancinci. I-yen ixutywe, ngelixa iimarike zentengiso zingenaso isikhokelo esicacileyo sosuku.
UChris Williamson, ingcali yezoqoqosho eyintloko e-IHS Markit, uthe: Uqoqosho lwe-eurozone lube nesiqalo esinzima esiqikelelweyo kude kube ngo-2021… ingakumbi kwicandelo leenkonzo…. Yiyo loo nto, ukurhoxa kwe-GDP kujongeka ngathi kwikota yokuqala, nangona imeko yangoku kufanele ukuba ibe phakathi xa kuthelekiswa nokwehla okuqwalaselweyo kwisiqingatha sokuqala se-2020.
Nangona kunjalo, ngamanyathelo okuqulatha intsholongwane kusenokwenzeka ukuba anyanzele uqoqosho lwe-eurozone kwiinyanga ezizayo kwaye nakwikota yesibini, xa unikwa ukuziswa okucothayo kwesitofu sokugonya, ugxininiso luya kuba kwisidingo sokugcina imigaqo-nkqubo yezemali neyemali ixesha elithile kwixa elizayo, ngakumbi, ukunqanda ukonyuka kokunyuka kokuphulukana nomsebenzi kwimizi-mveliso echaphazeleke kakhulu enjengokubuka iindwendwe, ukhenketho, ukhenketho, kunye nevenkile.
I-CAD iyahlala kwiNdawo yeXabiso leoyile
Idola yaseCanada ikwi ngaphezulu kweemarike kule veki. Ukubuyela kumngcipheko wokutya kunika isiseko sokukhula. Okwangoku, i-Kiwi iyaphucuka ngedatha yengqesho eyomeleleyo-kunokuba bekulindelwe, ngelixa i-loonie ilandela ukunyuka kwamaxabiso eoyile. Idola yase-Australia isala kwi-RBA, kodwa i-euro iyaqhubeka nokurhweba njengoyena ubuthathaka, inembono esezantsi kwikota ekufutshane.
Ingxelo yomsebenzi oqinisekileyo inokukhuthaza idola yaseCanada, kunye nokuvelisa inzuzo eninzi enxulumene namaxabiso aphezulu eoyile. Idola yaseCanada kusafuneka iphendule ekunyukeni ngokuthe chu kumaxabiso eoyile njengesiphumo sokuthobela okunamandla kwamazwe e-OPEC + kunye nethemba malunga nefuthe lezitofu kuqoqosho lwehlabathi. I-CAD inokuphakama ngoku ngempendulo ebekiweyo.
I-Bhanki yaseCanada kwintlanganiso yomgaqo-nkqubo wezemali kaJanuwari ishiye inzala yayo ikwi-0.50% kwaye igcina inkqubo yayo yokunciphisa izinto ngokuhamba kwexesha lokuthengwa kweeasethi. Ibhanki esembindini iqaphele isilumkiso malunga nethemba lokukhula kwexesha elifutshane kwaye ngoku iqikelela ukuba kukho isivumelwano sokukhula kwekota yokuqala ye-GDP. Nangona kunjalo, njengoko iyeza lokugonya liqhubela phambili, ukongeza kukhuthazo lwezezimali kunye namaxabiso aphezulu eemveliso, abenzi bomgaqo-nkqubo balindele ukuba umsebenzi woqoqosho uphinde ubuye kwixesha elide.
tags Idola laseKhanada, I-oyile endala, Euro
Intengiso yeoyile ukudibanisa iingeniso njengakwicala lokunyuka kwamandla
Ukuhlaziywa: 15 January 2021
Urhwebo oluqhubayo luyaqhubeka namhlanje kwiimarike zeoyile, kunye nomxholo weWTI ngokudibanisa amaxabiso kufutshane neendawo eziphakamileyo zamanqanaba akutshanje. Usuku olungathathi hlangothi kwidola yaseMelika labona abathengi babuya kwakhona, kukhokelela ekunyukeni kancinci kumaxabiso ngobusuku.
Isaphulelo kwioyile ye-WTI sayeka kufutshane neLwesithathu ephezulu ye- $ 53.93. Ukugxotha uLwesine ukusuka kwi- $ 52.24, amaxabiso aphantse avavanywa ngoLwesithathu ephezulu ye- $ 53.93 kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ngaphambi kokuba abuye umva kancinci. Olunye uphambuko olujikeleze i-54.00 yeedola luya kubonisa ukudinwa kokunyuka kunye nokwenza ukuba kuthengiswe kwitshathi (okanye ukuthatha inzuzo), okukhokelela ekubuyiselweni kwexabiso.
Ngokuchasene nale mva, ucango luhlala luvulelekile ukuze kufunyanwe ezinye kwixa elizayo kunye nokuchasana okuphakathi okuphakathi kwi- $ 54.45 (ngoFebruwari 2020 phezulu). Nangona kunjalo, ukulungiswa okunokubakho apha ngezantsi akufuneki kugwetywe ngenxa yeemeko ezikhoyo zokungaphezulu.
Njengoko iphakheji ye-Biden isuswe yidatha yengqesho ebuthathaka yase-US, iimarike azityekelanga ekunyuseni amaxabiso ngandlela thile. Baza kunika iNyakatho Melika igunya lokuthatha isigqibo sokuba ukubuyela kwakhona kwizikhundla eziphezulu kutshanje kufanelekile phambi kokuphela kweveki.
Ixabiso leoyile linokuHamba kuLindelo lwePhakheji yokukhuthaza uBiden
Ukunyuka okuzinzileyo kweoyile kubonakala ngathi kuphelisa ugcino lwegesi. Ubuninzi bokubuyiswa kwamaxabiso eoyile kukhuthazwe kukungazithembi, inqanaba leedola ezikhuthaza ukukhula kwempahla ebhodini, kunye ne-Saudis ekhokelela ekuhlawuleni ugcino lweoyile lwehlabathi.
Izinto ezinobungozi obuphezulu, kubandakanya amaxabiso eoyile, nazo ziyaxhamla kulindelo lokuba ukubhengezwa kolawulo lweBiden kwiphakeji yokuvuselela sisiqalo nje senkxaso yemali aya kuthi ayinike.
I-oyile ayihoyanga ingxelo yakutshanje ye-OPEC, engakhange itshintshe ubonelelo lwehlabathi okanye uqikelelo lweemfuno zeoyile zango-2021. Imfuno ye-oyile kulindeleke ukuba inyuke ngeebharethi ezizizigidi ezi-5.9 ngosuku ukuya kwizigidi ezingama-95.9 ngosuku. Ukuba iyeza lokugonya le-J & J COVID livunyiwe kwaye liphunyezwe ngempumelelo, liyakukunceda ukuqikelela imfuno yemveliso eluhlaza kwisiqingatha sesibini sonyaka.
Ephakathi kunye nexesha elide ezisisiseko seoyile zisabonakala zilungile, kodwa ukuba izithintelo ze-COVID zehlabathi ziyaqhubeka nokunyuka, kufanele iphazamise irali yamaxabiso eoyile.
tags I-oyile endala
Ii-USD zityhutyha umngcipheko kumakethi njengee-Spikes zedola zaseCanada ngenxa yexabiso leoyile ekrwada
Ukuhlaziywa: 9 October 2020
Idola yaseCanada inyuke ngokukhawuleza ngobusuku nje obunye emva kokunyuka ngamandla kwamaxabiso eoyile, ngokuyinxenye ngenxa yesitrayikhi eNorway esachaphazela imiphanda eyi-1 yezigidi ngemini yemveliso yeoyile ekrwada. Idola yaseCanada nayo yomelele kule veki, ilindele idatha yengqesho yenyathelo elilandelayo.
I-Yen ihlala ibuthathaka kakhulu kunye nedola yase-New Zealand.
Nangona kunjalo, idola ayikho kude kangako. Ezinye iibhere zedola ezintsha zibonwa kwiseshoni yaseAsia, njengoko idola inokufumana inkxaso yexesha elifutshane ngokuchasene nezinye iimali eziphambili ngaphambi kokuphela kweveki.
Idola yaseCanada yomeleze ngokuchasene uninzi lweyona mali iphambili kwiseshoni yaseMelika yokuqala, incediswa yidatha yengqesho eyomeleleyo-kunokuba bekulindelwe. Oku kuza phakathi kokunyuka okunamandla kwamaxabiso eoyile kule veki.
Kwelinye icala, idola liphantsi koxinzelelo jikelele njengoko iimarike zokulingana zehlabathi zibuyile kwimodi yomngcipheko.
Isalathiso sedola yaseMelika sikhawulezisa umda osezantsi kwiNgingqi ye-93.20
I-Index yeDola yaseMelika (i-DXY), elinganisa idola ngokuchasene noontanga bayo abaphambili, ihlala iphantsi koxinzelelo kwaye ijikeleza iiveki ezi-2 kwiindawo ezingama-93.20.
Isalathiso siwela kwiiseshoni ezininzi ezikwisigaba se-93.20 / 15 ekupheleni kweveki kwimeko efanelekileyo yeeasethi eziyingozi, ngakumbi emva kweendaba zamva nje ezopolitiko zase-US ezinokuthi ziphinde ziqhubeke nothethathethwano ngomnye umthetho oshukumisayo.
I-DXY iphantse yaguqula ngokupheleleyo inzame yokuqhubela phambili eyenziwe phakathi ku-Septemba kwaye isoyikisa ngokuqhubeka nokudodobala ukuba i-55-day SMA (93.29) yaphuke ngokuzinzileyo.
Isalathiso kubonakala ngathi siya kwinqanaba lokudityaniswa, kuhlala kungaphantsi kwezithintelo eziphambili ze-94.00. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha iinzame zokunyusa amandla kwi-DXY (zisabonakala) okwexeshana, njengoluvo olusisiseko ngokuchasene noluhlu lweedola ukusuka kulumko ukuya kwi-bearish.
tags Idola laseKhanada, I-oyile endala, Ixabiso le-US Dollar (DXY), iUSD